Sideen ula wadaagi karaa Twitrer? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideen UGU SHARE gareyn karaa Twitter-ka?
Waxaa laga yaabaa 9, 2021 0 comments 354
Twitter wuxuu siiyaa Isticmaalaha ikhtiyaarka ah la wadaag tweet -ka laga bilaabo Isticmaal kale, tan iyo markii dadku ay soo jiitaan fikradaha asxaabtooda, waxay u leeyihiin rabitaan kuwa kale inay ogaadaan shucuurta ay la kulmeen markay akhrinayeen.
Dabeecad ahaan, bani -aadamku waxay jecel yihiin inay is -dhexgalaan, soo jiitaan saaxiibbada iyo saaxiibbada; fikradahaas, Twitter -ka ayaa u wareegay door ka ciyaar khuseeya nolosha dadka si ay dhadhamintaasi u noqoto mid dhab ah.
Marka Isticmaaluhu gujiyo shaxanka Wadaagga, daaqad ayaa ka soo muuqan doonta afarta doorasho ee soo socda oo ay bixiso Twitter, oo leh ujeedo in Isticmaaluhu go'aamiyo halka uu Tweetkiisa ku hagayo.
Ku Dir Fariin Toos ah
Guji jaantuska baqshadda, daaqad ayaa ka muuqata erayada U dir Tweet, hoosta waxaa ku yaal astaanta muraayadda weyneyneysa oo tilmaamaysa Dadka Raadinta, marka gujinaya Twitter -ka ayaa bilaabaya raadinta waxayna soo bandhigaysaa liis.
Adigoo gujinaya, Isticmaalaha ka dooro liiska dadka aad rabto inaad la wadaagto Tweet -ka, xagga hoose ee daaqadda waxaa ku yaal daaqad kale oo u diyaarsan Isticmaalaha inuu ku daro faallada haddii ay rabaan.
Marka faallada la qoro, guji sawirka a diyaarad in la diro. Haddii Isticmaaluhu uusan rabin inuu faallo bixiyo, laakiin kaliya inuu u diro Tweet -ka, guji tirada dirista. Twitter wuxuu kugu wargelinayaa in la soo diray.
KU DAR TWEET WAXYAABAHA LA KAYDIYEY
Si aad u doorato Ku dar Tweet -ka ikhtiyaarka Alaabada keydsan, Isticmaaluhu waa inuu gujiyaa kelmadaha Alaabta la keydiyey, isla markiiba Twitter -ku wuxuu u dirayaa farriin Tweet -ka u keydisay alaabtii uu keydiyey oo aad ku sii wadato bogga Guriga.
Muxuu Isticmaaluhu u rabaa inuu Tweet ka kaydiyo isticmaale kale? Waxaa suurtogal ah inay sababtu tahay adiga oo ku cajabiyay oo aad rabto inaad ku aragto mid kale fursado. Haddii aadan kaydin, mar dambe ma arki doontid, haddii uusan milkiilaha Tweet mar kale ku qorin.
Markuu Isticmaaluhu xasuusto Tweet -ka taas saamaysay shucuurtaada oo aad rabto inaad aragto, waa inaad tagtaa astaanta ikhtiyaarrada badan ee ku taal dhinaca bidix ee boggaaga ugu weyn, guji erayga Badbaadiyey oo ay ku jiraan liiska Tweets -ka aad keydisay.
Nuqul ka samee Tweet -ka oo wadaag Tweet
Isticmaaluhu waa inuu gujiyaa kelmadaha Copy Copy Link oo madal Twitter -ka u diro a mensaje Waxaa ku qoran "La koobiyeeyay sabuurad." Qalabkani wuxuu ku yaalaa kombiyuutarka shaqsiga ee isticmaalaha.
Marka Isticmaaluhu rabo inuu arko Tweets -ka uu haysto la koobiyeeyay Laga soo bilaabo barta Twitter -ka, waxaad u baahan tahay inaad ka eegto kombiyuutarkaaga ikhtiyaarka sabuuradda oo halkaas waxaad ku arki kartaa dhammaan Tweets -yada aad ka codsatay Twitter.
Sida for La wadaag TweetMarkuu Isticmaaluhu gujiyo ikhtiyaarkan, Twitter wuxuu tusayaa daaqad ay ku qoran tahay liiska dadka uu la xiriiray, isagoo gujinaya dooro xiriiriyaha si uu ula wadaago, wuxuu kaloo leeyahay ikhtiyaar inuu ku daro faallo oo guji erayga dir.
1 Ku Dir Fariin Toos ah
2 KU DAR TWEET WAXYAABAHA LA KAYDIYEY
3 Nuqul ka samee Tweet -ka oo wadaag Tweet
Sidee loo arkaa fariin WhatsApp ah oo la tirtiray?
ABUURSIGA XISAABTA TWITTER HABRAACYADA BADAN